I-China i-Perforated Metal Cladding igcina iSakhiwo esivela kuMonakalo weMozulu mveliso kunye nabathengisi | I-Boegger
I-Perforated Metal Cladding igcina ukwakhiwa koMonakalo weMozulu
Ukufakwa kwesinyithi esenziwe ngesinyithi kusetyenziswa ngokubanzi kubakhi. Idibanisa ukhuselo lwangasese kunye nemisebenzi emininzi njengokukhanyisa, ukungena komoya, ukwahluka, iscreen selanga.
Isinyithi esenziwe ngesinyithi seScreen sokwakha amakhadi
Ukufakwa kwesinyithi esenziwe ngesinyithi kusetyenziswa ngokubanzi kubakhi. Idibanisa ukhuselo lwangasese kunye nemisebenzi emininzi njengokukhanyisa, ukungena komoya, ukwahluka, iscreen selanga. Eyona nto ibaluleke kakhulu, ikhusela izakhiwo kutshintsho lwemozulu.
Isinyithi esityhidiweyo sinezinto ezizinzileyo kunye namandla aphezulu kubunzima bomlinganiso, nto leyo eyenza kube lula ukwakha izakhiwo ezintsha kunye nokuhlaziya izakhiwo ezindala.
Emva konyango lomphezulu, ukubonakala kwesitayile sangoku kuyakwenza ukuba isakhiwo sibe sodwa ngakumbi kwaye sibe nomfanekiso obonakalayo.
I-Aluminium yentsimbi yokubopha intsimbi
Izinto ezibaluleke kakhulu.
Ukufakwa kwesinyithi esityhidiweyo kufuneka kuvezwe ngaphandle kwaye kufuna indawo enkulu, ke ngoko amandla ezinto kunye nokumelana nokubola kubalulekile. Kananjalo nomlinganiso wamandla ukuya kubunzima kuthathelwa ingqalelo ubunzima kulwakhiwo kunye nozinzo lobume besakhelo.
IAluminiyam zezona zinto zisetyenziswa kakhulu.
Nokumelana Ephakamileyo. Ubunzima obulula. Inkangeleko entle emva kokuthambisa.
Intsimbi yemozulu ikwasetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezinemozulu embi, kuba ineziphumo ezilungileyo zokulwa nemozulu.
Round Hole watyabeka Building khazi
Iphaneli yentsimbi eyenziwe ngesinyithi enobumba obunxantathu kunye nomphezulu wesilivere.
Iindidi zemingxunya yokubopha zibonisa ixabiso lokuhombisa izakhiwo.
Isitayile esimfutshane, iipateni zemingxunya ezilungelelaniswe rhoqo, ezinje ngeenxa zonke kunye ne-hexagonal ziyathandwa.
Kwimpembelelo ebonakalayo ebonakalayo, imilo yomngxunya kunye nobungakanani ziyafumaneka.
Iindawo ezivulekileyo ezifanelekileyo zibonelela ngokungenisa umoya. Uninzi lwabaqulunqi bakhetha indawo evulekileyo engama-35% ukulinganisa ngaphezulu kwezinto, njengokukhanyisa, ukungena komoya, ukwahluka, iscreen selanga kunye nokukhuselwa kwabucala.
Unyango oluphezulu lubandakanya ukutyabeka umgubo kunye ne-anodizing
Powder ukutyabeka ibonelela ukhetho umbala ezininzi yokugubungela umphezulu intsimbi yokuqala, nto leyo enokunceda anti umhlwa kunye nokumelana.
Ukwenza i-Anodizing kunokugcina ubumenyemenye bentsimbi ngelixa udaya isinyithi. Ihlala isebenza kwiipaneli zealuminium, ezinokukhusela iiphaneli ngokuchasene negcwala kunye nokubola.
Iphaneli egobileyo yesakhiwo sophahla lwesakhiwo
Ngaphandle kwezi zinto zingasentla, abaqulunqi bayakuthathela ingqalelo ubume obudibeneyo bezikrini ezigqityiweyo. Singanceda ngokuqhubekeka iiphaneli njengokugoba okanye ukusonga.
Ukugqunywa kwesinyithi esenziwe ngesinyithi kusetyenziswa ngokubanzi kwiiprojekthi ezahlukeneyo, ezinjengeendawo zokupaka, izikhululo zikaloliwe, iindawo zentengiso, izibhedlele, izakhiwo zezakhiwo njl.
Egqithileyo Intambo ye-Stainless Rope Mesh Wall yoDonga lokunyuka kwezityalo
Okulandelayo: Iscreen esenziwe ngesinyithi seSinyithi soKwakha uPhahla
Mesh zokuhombisa Ukwakha khazi
Iscreen esenziwe ngesinyithi seSinyithi soKwakha uPhahla
Rope Stainless enemingxuma Green Wall for Climbi ...
Intsimbi eyandisiweyo ifakiwe kwisakhiwo iyanceda ...